Sida loo tirtiro farriimaha Facebook Messenger ee qof walba | Golaha Moobaylka
Sida loo tirtiro farriimaha Facebook Messenger qof walba
Qolka Ignatius | | Facebook
Xaqiiqdii waqti uun noloshaada ka mid ah, waxaad ku tiri waxyaabo gadaal dambe Waad toobad keentay. In kasta oo nolosha dhabta ah aan tirtiri karin ficilkeenna (laakiin waan iska furan karnaa nafteena), waxaan ku sameyn karnaa codsiyada farriimaha, halkaasoo WhatsApp uu yahay boqorka aan muran ka taagnayn tirada dadka isticmaala laakiin aan ahayn waddamada oo dhan.
Isticmaalayaasha Facebook waxay u istcimaalaan Messenger (Madal fariinta Facebook) iyo WhatsApp labadaba. Maaddaama ay labadooduba ku kulmayaan hal dallad, waxay ahayd in laga filo inay isku si u shaqeeyaannasiib daro maaha, oo ay ku jirto awoodda tirtirka farriimaha.
1 Sirta fariimaha ee fariinta
2 Tirtir fariimaha kujira Messenger
2.1 Tirtir farriinta
2.2 Jooji rarka
3 Sida loo tirtiro farriimaha Rasuulka ee 'Android'
4 Sida loo tirtiro farriimaha Messenger ee ku jira iPhone
5 Sida loo tirtiro fariimaha Messenger ee PC / Mac
6 Sida loo tirtiro wada sheekaysiga Messenger
7 Beddelka si loo tirtiro farriimaha ku jira Messenger
7.1 Qaab kumeelgaar ah
7.2 Wadahadal qarsoodi ah
Sirta fariimaha ee fariinta
WhatsApp wuxuu adeegsadaa sirta dhammaadka-dhamaadka (farriinta waa la xirayaa markii la dirayo oo waxaa si otomaatig ah u qayaxaya qofka qaata farriinta) wada hadalka, marka kuwan waxaa lagu kaydiyaa oo keliya aaladaha moobiilka ee adeegsadayaasha iyadoon nuqul lagu kaydinaynin server-yada.
Messenger, dhanka kale, sir fariimaha sida TelegramSi kastaba ha noqotee, sirta maahan dhamaadka-ilaa-dhamaadka. Furayaasha si loo tirtiro farriimaha waxaa laga helaa server-yada shirkadda. Sidan oo kale, Messenger, sida Telegram, waxay noo ogolaaneysaa inaan wadahadalkeena si raaxo leh uga sii wadno kombiyuutarkayaga ama kaniiniga iyadoo aan taleefannadeenna casriga la shidan.
Tirtir fariimaha kujira Messenger
Intii aad ku jirtay WhatsApp waxaan haysanaa waqti xadidan oo aan ku tirtiri karno fariimaha aan dirnay, ee Messenger waqtigu waa mid aan xad lahayn, sida Telegram-ka, iyadoon loo eegin in farriinta la akhriyey iyo in kale. Si kastaba ha noqotee, barnaamijka Mark Zuckerberg wuxuu na siinayaa laba habab oo kala duwan, habab kaliya ku adkeynaya shaqada oo jahwareerinaya adeegsadaha: Tirtir fariinta iyo Tirtir fariinta.
Inta lagu jiro 10ka daqiiqo ee ugu horeeya kadib markaan fariin kuqornay Messenger, waxaan ikhtiyaar u leenahay tirtir farriinta annaga iyo kuwa kale ee wada-hadalka ahba. Haddii 10 daqiiqo ay horey udhaceen, fariinta waxaa kaliya laga tirtiri doonaa wada sheekaysigeena, ma ahan sheekada halka ay kaqeybgalayaasha kale ee sheekadu kujiraan.
Ikhtiyaarka kale ee uu Rasuulku noo diyaariyo inaan tirtirno, markan, farriimaha ku jira Messenger waa fariin Joojin. Magacan xiisaha leh, waxaan ku helnaa shaqada runtii noo oggolaaneysa inaan tirtirno farriimaha in aan u soo dirnay Rasuulka iyadoon loo eegin waqtiga ka soo gudbay tan iyo markii aan qornay.
Sida loo tirtiro farriimaha Rasuulka ee 'Android'
Si aad u tirtirto ama u joojiso farriimaha ku jira arjiga Rasuulka ee loogu talagalay Android, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa riix oo hayso fariinta su'aasha ah.
Marka xigta, waa inaan gujinnaa badhanka Tirtir oo ay matalaan qashinka.
Ugu dambeyntii, waa inaan dooro ikhtiyaarka aan rabno:
Tirtir aniga (ikhtiyaarka la muujiyey haddii in ka badan 10 daqiiqo ay dhaaftay markii la qoray) / Tirtir dhamaan (haddii 10 daqiiqo aysan dhaafin tan iyo markii aan qornay)
Sida loo tirtiro farriimaha Messenger ee ku jira iPhone
Nidaamka lagu tirtiro farriimaha Rasuulka ee iPhone-ku waa ficil ahaan la mid ah sida Android.
Markaanu furno dalabka oo aan helno fariinta aan doonayno inaan tirtirno, fariinta ayaan qabaneynaa ilaa menu ay ku jiraan xulashooyinku ka muuqdo xagga hoose.
Kadib dhagsii inbadan oo waxaan dooranaa xulashada Delete. Kadib waxay ina tusi doontaa laba ikhtiyaar:
Tirtir aniga (ikhtiyaarkan ayaa la muujiyay haddii in ka badan 10 daqiiqo ay dhaaftay markii la qoray) / Tirtir dhamaan (haddii 10 daqiiqo aysan dhaafin tan iyo markii aan qornay)
Iyo ikhtiyaarka Jooji rarka.
Sida loo tirtiro fariimaha Messenger ee PC / Mac
Messenger waxaa laga heli karaa PC iyo macOS labadaba iyada oo loo marayo Facebook codsi u gaar ah, codsi loogu talagalay in lagu sameeyo wicitaano fiidiyoow ah oo ay kaqeybgalayaan ilaa 50 kaqeybgalayaashu, in kasta oo aysan gaar u ahayn, maadaama aan sidoo kale u adeegsan karno sii wad wadahadalkeena.
Si aad u tirtirto fariin, waa inaan jiirka dul saarnaa fariinta aan dooneyno inaan tirtirno, riix badhanka midig jiirka dooro ikhtiyaarka aan dooneyno: Jooji shixnad ama Tirtir aniga ahaan.
Sida loo tirtiro wada sheekaysiga Messenger
Haddii aad rabto gebi ahaanba tirtir wadahadalka aad ku ilaalisay dhanka Messenger, waa inaad ku dhaqaaqdaa talaabooyinka aan hoosta ku faahfaahinaayo:
Marka hore, waa inaanu riixnaa oo farta ku haynaa wadahadalka aan doonayno inaan tirtirno.
Marka xigta, menu hoos-u-dhigis ah ayaa la soo bandhigi doonaa kaas oo aan ku dooran doonno xulashada Delete.
Ikhtiyaarkani wuxuu ka kooban yahay dhammaystirka wadahadalka sidaas Marnaba awoodi mayno inaan dib u helno. Si ka duwan WhatsApp, taas oo noo oggolaaneysa inaan diiwaangelino sheekooyinka nagu dhibaya shaashadda weyn (taas oo noo oggolaaneysa inaan la tashanno goor dambe ama aan dib u bilaabi karno), Messenger gudaheeda suurtagalnimadaasi ma jirto.
Beddelka si loo tirtiro farriimaha ku jira Messenger
Rasuulka waxay na siisaa laba ikhtiyaar si loo ilaaliyo wada hadalkayaga la xakameeyo wakhti kasta iyada oo loo marayo Qaabka Ku-meel-gaadhka ah iyo Wadahadalka Wadahadalka Qarsoodiga ah.
Qaab kumeelgaar ah
Qaabka kumeelgaarka ah wuxuu noo oggolaanayaa inaan yeelanno wadahadal si otomaatig ah u daryeela tirtir fariimaha oo dhan mar la aqriyo marka aan ka baxno wadahadalka. Xulashadani waa mid ku habboon inaadan uga tagin raad raaca fariimahayaga dadka kale.
Markuu qofku akhriyo farriinta aan dirnay, jeeg xaqiijin buluug ah ayaa la soo bandhigayaa isagoo nagu wargelinaya in la akhriyey iyo in farriinta si toos ah ayaa loo tirtirayaa markaad sheekada ka baxdo.
Hab ku meel gaar ah ayaa la heli karaa xulashooyinka wada hadalka ee aan abuurnay. Waxaa loo heli karaa oo kaliya wada hadalada cusub iyo markii la hawlgeliyo, waxay muujineysaa isku xirnaanta madow si looga sooco sheekooyinka kale.
Sidoo kale, haddii qof shaashad ka qaado ama shaashadda duubo, waxaan heli doonaa ogeysiis.
Wadahadal qarsoodi ah
Wadahadalka qarsoodiga ah wuxuu u shaqeeyaa si la mid ah WhatsApp, sirta wada hadalka dhamaadka-ilaa-dhamaadka, sidaa darteed waxaa kaliya laga heli karaa taleefanka gacanta, kama imaan karo PC ama Mac version.
Doorashadan waa in aan dhaqaajino labadeena iyo wada hadalkeena. Intaas waxaa sii dheer, waxay noo ogolaaneysaa inaan dhisno waqtiga ay tahay inuu ka baxo fariinta la soo diray la akhriyo ilaa si toos ah loo tirtiro. Waqtiga masaxa waa 5 ilbidhiqsi, 10 ilbidhiqsi, 30 sekan, 1 daqiiqo, 5 daqiiqo, 10 daqiiqo, 30 daqiiqo, 1 saac, 6 saacadood, 12 saacadood ah, iyo hal maalin.
Si loo aasaaso markan, waa inaan dhagsii saacadda ka muuqata sanduuqa qoraalka hortiisa. Marka la dejiyo, tani waxay la mid noqon doontaa dhammaan fariimaha, inkasta oo aan wax ka beddeli karno farriimaha aan dooneyno inaan ku sii jirno shaashadda muddo dheer.
Waqtiga ka muuqda shaashadda mar akhri, sidoo kale way ina saamaynaysaa, markaa mar haddii uu dhaafo, qoraalka ayaa la soo bandhigi doonaa halkii Fariintani adiga ayey kaa dhacday.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Shabakadaha Bulshada » Facebook » Sida loo tirtiro farriimaha Facebook Messenger qof walba
samee Bilaha 6
gudaha facebook messenger, ima siinayso fursad aan ku tirtiro aniga oo 10 min ma dhaafin
U jawaab azuara
Sida loo galo Twitter-ka adoon iska diiwaan gelin
Sida loogu daydo iPhone-ka kombiyuutarkaaga barnaamijyadan fudud